Kune Domain Parking Yakakodzera? | Martech Zone
Kune Domain Parking Yakakodzera?
Svondo, Ndira 28, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kwete… kana pamwe kwete. Kwete yangu, chero nzira.
Chii chinonzi Domain Parking? Ndipo paunenge uine zano rakakura rezita rezita, iwe unotarisa kuti uone kana yatengwa. Haisi… saka unozvitenga. Panzvimbo pekushandisa iyo domain yewebhu webhusaiti, iwe 'ipake' iyo. Domain kupaka inzira yekuwedzera mari uye vamwe veakakura varidzi vemasizinda mazita vanoita mamirioni pairi. Pane nzira mbiri dzekuita mari nedomain yokupaka:
Vanhu dzimwe nguva vanyore mukati URL pane kuitsvaga. Kana iwe ukaitika kuve uine zita rezita, iwe unogona kuisa kushambadza kunoshanda pane peji rekumhara. Kana vanhu vakadzvanya pane kushambadza, iwe unobhadharwa nemushambadzi.
Vanhu vanoda zita rezita, saka ivo vanokupa iwe chinopihwa.
Pandaive ndichiverenga chinyorwa nhasi, chakandiyeuchidza nezve kuyedzwa kwebhizinesi iri iro randaida kupindura nezvaro. Rinopfuura gore rapfuura, ndakaverenga nezve mamwe masayiti muBhizinesi 2.0 magazini iyo yakapa Domain Parking zviwanikwa. Panguva iyoyo, Sedo yaive imwe yemakambani ekumisikidza maseru aive asina mari yepamberi. Ini ndakanyora blog blog ndichitaura kuti ndaizozvipfura.
Izita remadunhu randakanga ndine rombo rakanaka kwazvo raive navyvets.com. Mushure megore rekuti dura rimiswe, ndakave nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekurova akaita $ 93 pasina zvinopihwa zvemutengo wekutengesa we $ 1.22. Sezvo ini ndichibhadhara $ 2,500 pagore pakuvandudzwa kwega kwega domeini, iko kurasikirwa kwakanaka.
Icho chaive chiri changu chakanakisa kuita chinongedzo.
Ehe pane nzira dzekuita kuti izvi zvinyatsoshanda. Dai ndaive nezviuru zvemazita echisimba akamiswa nemunyori aindipa mitengo yakaderera, ndakakwanisa kushambadza pachangu… pamwe ndichiisa zvirimo pamasaiti nekushambadzira kwehunhu - ndinogona kutora purofiti. Kana ndikaita dhora pagore pazita rega rega, ndaigona kutenga mazita zviuru zana ndowana mari yakachena. Asi ini handina nguva yekuita izvozvo. Zvakare, mazita akanakisa akatotengwa kumusoro saka zvaizotora nguva yakawanda kungo mirira kumatunhu akapera kana mari yakawanda kuyedza kutenga mamwe angashandura bhuru kana maviri.
Nekudaro, yangu domain yekupaka basa rave kuda kupera. Yangu yekupedzisira kupfura ichave yekuisa yangu yakanakisa domeini kumusoro kuSedo kwe $ 39 kuti ive nayo pamberi peji kuti ndione kana ndichigona kuwana mutengi. Ini ndinonongedzera mamwe madomaini angu kune ino blog, iyo inogadzira zvirinani zvirinani yekudzvanya-kuburikidza chiyero pakushambadzira kwayo kupfuura Sedo ($ 0.10 EPC). Ini ndichakuzivisa iwe kuti zvinofamba sei!
Tarisa uone, pano panouya Flex!
Jul 5, 2007 na3: 23 PM
Waratidza zvimwe zvezvinetso chaizvo ne nzvimbo yokupaka ” sezvazviri ikozvino. Iwe unofanirwa kuve uine mashoma mashoma epamhepo madomeni kana akati wandei madoma anoita zvishoma zvirinani pane kuzvibhadharira ivo pachavo.
Kune rimwe divi, mamwe madomaini angu anowanzo gadzira zvirinani pane zvaanoita nezvirimo uye AdSense kushambadza pavari.
Nov 27, 2007 pa8: 37AM
Domain Parking HAIYE KUSHANDA, inongori kutambisa nguva, kunze kwekunge uine 100+ 200+ yakanaka domain kuyedza, kunyoresa mashoma maseru uye unoshuva kuwana purofiti chiroto, usatambise nguva
May 8, 2008 pa 3: 51 PM
Kana zita rezita riri kuunza mari zhinji kupfuura rejisiti iyo zvakakodzera kuti iripake. Tsvaga zana remhando iyi yedomeini uye unogona kugadzira mari yakanaka
May 12, 2008 pa 4: 38 AM
Kana iwe ukashandisa Domain Parking makambani ivo vari kutora chikamu chemari yako! Kana iwe ukagamuchira yako domeini yekupaka script (senge iyo inowanikwa kubva http://www.domainzaar.com ) iwe chengeta 100% yeako ad ad mari ... zvakare ivo vari kumhanya kukwidziridzwa kweMAHARA .COM DOMAIN ZITA uye YEMAHARA DZIMWE DOMAIN FINDER SOFTWARE kusvika kumagumo kwaMay 2008. zviongorore http://www.domainzaar.com
Jul 22, 2008 pa 10: 01 AM
Haugone kuramba kutaura pano nezve domainzaar.
Ah mudiwa. Kutambisa mari sei. Kunyanya mari yangu, yangu $ 100.
Thomas - kana chero zita rake - akabatsira zvikuru mukutsinhana maemail pandanga ndichiedza kubhadhara ASI mushure mekurodha pasi .. .. mhoro chero munhu kumba ??? Mazhinji emaimeri anotungamira uye kuburikidza neye yavo webhusaiti fomu fomu. Hapana! Hapana mhinduro.
Iyi script ndeye IMHO kutambisa kwe $ 100.
Pane zvinyorwa zvemahara zviripo zvinonyatsoshanda.
Usatambise mari yako yawakawana zvakaoma kuitumira kune domainzaar.
Jul 10, 2008 na10: 35 PM
Ndakatenga kubva kudomainzaar gore rapfuura, chikanganiso chikuru
Ndakanga ndiine zita rakanakisa rezita (bas3.com) uye ndakaisa iyo domainzaar software pairi, svondo raitevera, mumwe munhu akabvuta DNS yangu uye anga achiinongedzera kune yake webhusaiti. DZ inochengeta iyo admin password mune yakajeka mufaira rinowanikwa.
Ndakabvunza te programmer kuti igadzirise izvi, ndakamirira mwedzi miviri ndikazoisiya.
Ndiri kushanda kuti ndiwane mhinduro yakatarwa yedomain yokupaka kumusoro, iyo inogona kukurumidza kuendesa kiyi kiyi yakavakirwa pa5 peji saiti mukati meminiti kana zvakadaro, ndiri kufunga nezvekuti ndibhadharise sei, ndinofanira kubvisa% pamusoro? ndinofanira here kuva nemari yegore rose yenhamba shoma yemadomaini? ndinofanira kubvumidza kuve nayo sechigadzirwa chinogoneka?
izvi ndizvo zvinhu zvandinozvibvunza, coder iri kujairana newebapps aPI inowanikwa pese pese pamambure, ini ndinongoda kuigadzira nekumusika.
Jul 31, 2008 pa 8: 26 AM
Domain Zaar inyadzi, kunyepedzera, uye kukanganisa kune chero munhu anofunga kutenga chigadzirwa. Iyo software haishande sekutsanangurwa uye hapana rutsigiro. Kana iwe usina hanya nekuparadzana ne $ 99 enda mberi uye uzviite… chigadzirwa chako hachishande nemazvo uye hachimbofi chakanzwa chero chinhu kubva kuZaar Scam murume zvakare. Scam Guta.
Sep 13, 2008 pa 7: 00 AM
Zvese zvisiri. Edza fabulous.com uye hitfarm.com - vanoda kuenda pane avo ekutanga mapurogiramu, zvakadaro. Kutanga makore mashoma apfuura, ikozvino kuita 12,000 / mwedzi tora kumba, 23,000 / mo zvakakomba.
Dec 16, 2008 pa 6: 08 AM
Domain yokupaka ndeyevanhu vane husimbe vasingakwanise kusvika mukugadzira otomatiki microsites yemazita avo echizinda. Cons of domain domain yokupaka ndeyekuti iwe unowana chete 30% yezvaunogona uye kuti hausi kuvaka iyo zera chinhu kune ako madomains.
Douglas, ndinokutendai nehurukuro iyi. Zano diki, kana iwe usina hanya: chinja munyori wako. Ini handimbobhadhara inodarika $ 8 kusvika $ 9 yekuvandudzwa. $ 14.95 iri nzira yakanyanya kukwirira, nzira yakanyanya kukwirira !!! Iwe unogona nyore kuchengetedza $ 6 pane yega domain zita. Zvinonzwika kunge bhinzi kune imwe domaini asi ipe iyo kuverenga nekukurumidza kana iwe uine, toti, zana kana zana mazita emadomeini… Vazhinji vanogadzira nzvimbo vari kukanda mota nyowani uye mazororo emahombekombe kune avo vanodhura marejista 🙁
Ndira 28, 2009 na4: 36 PM
Iyi ndiyo inonyanya kuseka blog posvo nezve domaining uye domain kupaka kwandakaverenga munguva refu. Domain yokupaka ine zvikanganiso zvayo uye iri kurasikirwa kubwinya negore rega rega rinopfuura asi rakanyatsoita generic domain mazita achiri kuita kuti varidzi vawo vawane mari yakanaka (ndiwo mazana kuzviuru zvemadhora pazuva zvakasiyana nemuenzaniso wako weupenzi wedhora pamazana zana ezita remazita. kurasikirwa kukuru kana iwe uchinge waita yekuvandudza fizi.) Uye kumisikidza yako maonero pamusoro pekutamba munzvimbo dzedomain nemazita akashata edomain ayo a real domainer aisazombozvinetsa kuve nawo rega paki ndeimwe chikanganiso. Kana paine chero chinhu, uye chero domain anokuudza, iwe unenge uine mukana uri nani wekuita mari uye / kana kubhenekesa domeini rako nekukudziridza. Mamwe chete marudzi emazita echisikigo mazita anoita zvakanaka apo akamiswa uye navyvets.com haisi imwe yadzo. Zvirinani kuenzanisa maapuro nemaapuro pane kuenzanisa maapuro ne broccoli. Ingoti '
Ndira 28, 2009 na7: 40 PM
Wow - handina chokwadi chekuti ndakafanirwa nemubairo we 'most riduculous blog post'. Ini ndinobvumirana newe, chaizvo. Ini ndangoti haisi yangu uye ini ndakapa mamwe magwaro anotsigira. Vamwe vanhu vanogona kuiwana iri bhizinesi rine mari ... kwete ini chete.
Jun 27, 2009 pa6: 03AM
Domain domain Kupaka Concept Kubatsirwa Ini Ndashanyirwa iyo Sedo.Site Yezita reDomain zita PARKING ruzivo .Zvakanaka .U unogona zvakare Kutenga zita reDomain Pane saiti.Tucktai.com& tengesa iyo paKushandisa Bulk Kunyoresa.U unogona Gadzira Saiti Yezita reZita reKupaka & mutengesi iwe unogona zvakare kuve Mutengesi wenzvimbo ..